News - Lyophilized အသစ်သောသရဖူ nucleic acid ဓါတ်ကူပစ္စည်းကိုအခန်းအပူချိန်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး ၄၇ ℃မြင့်သောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါဟာအအေးကွင်းဆက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်!
Lyophilized အသစ်သရဖူ nucleic acid ကိုဓါတ်ကူပစ္စည်းကိုအခန်းအပူချိန်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပြီး ၄၇ ℃မြင့်သောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါဟာအအေးကွင်းဆက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်!
ပင်လယ်ရပ်ခြားနူကလိယအက်ဆစ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ ၀ ယ်လိုအားကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည်
WHO ၏ကိန်းဂဏန်းများအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်ညနေ ၄ နာရီအထိဘေဂျင်းစံတော်ချိန်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းတွင် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်သည် ၂၉.၄၄ သန်းကျော်လွန်ခဲ့ပြီး ၉၃၀,၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။
ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ပင်လယ်ရပ်ခြားကပ်ရောဂါနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အချိန်တွင် COVID-19 ဘူမိအက်ဆစ်ထောက်လှမ်းခြင်းဓါတ်ကူပစ္စည်းလိုအပ်မှုမှာကြီးမားသည်။ တရုတ်ရောဂါရှာဖွေရေးဓါတ်ကူပစ္စည်းကုမ္ပဏီများသည်ထုတ်ကုန်အသုံးချခြင်းတွင်လက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့သည်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ကြီးမားသောအားသာချက်ရှိသည်။ သို့သော်ပြည်ပမှပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရှုပ်ထွေးပြီးပြproblemsနာများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။
ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးထုတ်ကုန်များအတွက်တိုင်းပြည်၏ပို့ကုန်ပေါ်လစီများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ နိုင်ငံအသီးသီးရှိလူများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အတူဓါတ်ကူပစ္စည်းများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်သည်ကြာရှည်နေပြီးမသေချာမရေရာမှုများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကုန်ပစ္စည်းပြproblemsနာများနှင့်အတူ ဓါတ်ကူပစ္စည်းထင်ရှားတဲ့ဖြစ်လာကြပါပြီ။ အပူချိန်စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် ၅၀ ဂရမ်ထက်နည်းသောနျူကလိအက်ဆစ်ထောက်လှမ်းသည့်ဓါတ်ကူပစ္စည်းတစ်ဘူးနှင့်ရေခဲခြောက်ကီလိုဂရမ်အနည်းငယ်သည်နှစ်ရက်သုံးရက်သာကြာနိုင်သည်။ဝေးလံသောအအေးကွင်းဆက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြofနာသည်ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင်အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်လာနိုင်သည်။
နိမ့်သောအပူချိန်လိုအပ်ချက်များအလွန်မြင့်မားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပေါ်။ သမားရိုးကျနူကလိအက်ဆစ်ထောက်လှမ်းခြင်းဓါတ်ကူပစ္စည်းများကို (-20 ± 5) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အအေးကွင်းဆက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အရထုတ်လုပ်သူမှထုတ်ပေးသောဓါတ်ကူပစ္စည်းများ၏အမှန်တကယ်အလေးချိန်သည်သေတ္တာ၏ ၁၀% အောက် (သို့မဟုတ်ဤတန်ဖိုးအောက်တွင်ရှိသည်) ဖြစ်ပြီးအလေးချိန်အများစုသည်ခြောက်သွေ့သောရေခဲ၊ ရေခဲထုပ်များနှင့်ရေမြှုပ်သေတ္တာများမှလာသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်မားသည်။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတိုးချဲ့နှင့်အအေးကွင်းဆက်သက်ရောက်မှုလျှော့နေကြသည်။ အထူးကာလများတွင်ဓါတ်ကူပစ္စည်းကိရိယာများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်ကိုများစွာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ သမားရိုးကျအရည်ဓါတ်ကူပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အတွက်တင်ပို့သူများကပုံမှန်အားဖြင့်ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြိမ်ပေါင်းများစွာပါသောအအေးကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမှုများကိုပြင်ဆင်လေ့ရှိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပူချိန်ကိုမအာမခံနိုင်ပါကဖောက်သည်ထံသို့ပေးပို့သောဓါတ်ကူပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးသည်မေးခွန်းထုတ်စရာကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲဖွဲ့စည်းမှုမလုံလောက်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ရန်နေရာမလုံလောက်ခြင်း ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်ပုံမှန်မော်လီကျူးစစ်ဆေးသည့်စီမံကိန်းများကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးရေခဲသေတ္တာအများအပြားကိုတပ်ဆင်ထားမည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်largeရိယာကျယ်ဝန်းသောအအေးခန်းသိုလှောင်ခန်းများထပ်ထည့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများမှ -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သိုလှောင်ရုံသို့ရောက်ရှိနိုင်သောလှူဒါန်းသည့်အဖွဲ့အစည်းများသိုလှောင်ရုံများစွာမရှိပါ
Full- အစိတ်အပိုင်း ကျောက်စိမ်း ပုံမှန်အပူချိန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဓါတ်ကူပစ္စည်း, nucleic acid ကိုဓါတ်ကူပစ္စည်းတင်ပို့
မော်လီကျူးအဖြေရှာတဲ့ဓါတ်ကူပစ္စည်းများကို -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည်ကိုပြိုကွဲစေရန်ရှန်ဟိုင်း Chuangkun Biotech Inc. မှတီထွင်ထားသော "Novel coronavirus 2019-nCoV RT-PCR nucleic acid acid (lyophilized)" သည် အပြည့်အဝပါဝင်သောအေးခဲနေသောအပူပိုင်းဓါတ်ကူပစ္စည်းများသည်အပူတည်ငြိမ်မှုရှိသည် မြင့်မားသောအပူချိန်ကို ၄၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည် အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း 60 အဘို့နှင့်အခန်းအပူချိန်မှာသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးအခန်းအပူချိန်မှာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အရည် COVID-19 Nucleic Acid ဓါတ်ကူပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အတိတ်တွင်အအေးမိကွင်းဆက်ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပြီးကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ဖိအားပေးမှုကိုသက်သာစေသည်။
၏အားသာချက်များ ကျောက်စိမ်း nucleic acid ကိုဓါတ်ကူပစ္စည်း
ရှန်ဟိုင်း Chuangkun Biotech Inc ၏ပြည့်ပြည့် ၀၀ ပါဝင်သော COVID-19
အဆင့်တစ်ခုပြီးပါပြီအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်စီတန်းသန့်စင်ထားပြီး PCR တုံ့ပြန်မှုစနစ်ပြင်ဆင်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးသောအခါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပစ်မှတ်3ခုရှာဖွေပါအဆိုပါပစ်မှတ် Novel coronavirus ORF1a /bဗီဇနှင့် N ဗီဇကိုဖုံးလွှမ်း။ မှားယွင်းသောဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်အတွက်ပြည်တွင်းရည်ညွှန်းဗီဇ၏ IC စစ်ဆေးမှုကိုထုတ်ကုန်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုနမူနာယူခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းမှတိုးချဲ့ခြင်းအထိထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီးမှားယွင်းသောဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ စစ်ဆေးခြင်းလွဲချော်။
ယခုလက်ရှိတွင်အပြည့်အ ၀ ပါဝင်သော COVID-19 ဘူမိအက်ဆစ်ထောက်လှမ်းခြင်းဓါတ်ကူပစ္စည်းသည်အီးယူအီးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံတင်သွင်းမှုနှင့်တင်ပို့ခြင်းအတွက်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အဖြူရောင်စာရင်းတွင်အောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာကိုပြည်ပသို့တင်ပို့ရန်တရားဝင်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Shanghai Chuangkun Biotech Inc.has သည်ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များတင်သွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းများအတွက်တရုတ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်သောနောက်ဆုံးပေါ် "ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏နိုင်ငံခြားကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများစာရင်းတွင်နိုင်ငံခြားအဆင့်စံသတ်မှတ်ချက်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း" စာရင်းတွင်ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ပို့ကုန်အရည်အချင်းများကိုရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်တင်ပို့နိုင်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်နယ်နိမိတ်ကိုမသိနိုင်သဖြင့်ကပ်ရောဂါကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ပူးတွဲတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်သည်။ အပြည့်ပါဝင်သောအေးခဲ - ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်း COVID-19 nucleic acid ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဓါတ်ကူပစ္စည်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်အကျိုးရှိသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါ။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါအောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းအားအတူတကွတုံ့ပြန်နိုင်ရန်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ရှန်ဟိုင်း Chuangkun Biotech Inc သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော "Novel coronavirus 2019-nCoV RT-PCR nucleic acid detection kit (lyophilized)" ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ တရုတ်အာဏာကိုဆန့်ကျင်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
post အချိန်: အောက်တိုဘာ -28-2020